एकपाका कार्यकर्ता र नेकपाका कार्यकर्ता.. « Gajureal
एकपाका कार्यकर्ता र नेकपाका कार्यकर्ता..
प्रकाशित मिति: १० मंसिर २०७५, सोमबार ११:५९
चिया पसलमा ‘एकपा’का एकजना कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको वकालत गर्दै थिए – ‘संसदको उपस्थिती, जनमत र क्षमताको हिसावले हाम्रो पार्टी सबैभन्दा लोकप्रिय छ ।’
छेवैका एक ब्यक्तिले ब्यंग्यात्मक पाराले थपे- ‘हो त ! जितले ठुलो ! दुई शक्तिले ठुलो ! नेताहरूको जन्ति नै ठुलो ! कार्यकर्ताको लावालस्करै ठुलो ! अध्यक्ष दुई कार्यालय नै ठूलो ! कुरै ठूलो ! अनि ठुलो नमान्न पाइन्छ ? कुटाई खाइन्छ नि !’
अर्को छेउमा चुपचाप चिया पिईरहेका एक युवाले भने – ‘हो नि, नेकपा मोटाएको होइन सुन्निएको छ । जरामा मल र आँतमा बल नभएको पाउरोटी जस्तो भएको छ ।कुरा सुन्नमा छ, काम देख्नमा छैन । नाम एकता तर कमिटीहरु कताकता भै सक्यो ।
हिजो आफ्नो पार्टीको बिरुद्धमा कसैले चुँ गर्यो कि बैचारिक छुरा बनेर प्रतिबाद गर्ने कार्यकर्ता नुन खाएको कुखुरा झै झोक्राएर बसेका छन् । नबसुन पनि किन, नेतृत्वको काखा र पाखाको शैलीका कारण सेकिएर सेलाए पछि !
हिजो स्वार्थका निम्ति दल, बदलको दलदलमै डुबेर हिलो चुहाउँदै पार्टीमा फर्किएकाहरु दिन दुगुना रात चौगुना शक्तिशाली हुँदैछन् । ‘पुराना बिलाए, नयाँ कहलाए’ भने झैं ‘फेरि नै नलगाई जोगिको आगमन’ भएको देख्दा पुरानाले पेशा नै परिवर्तन गर्ने स्थिति आएको छ ।
स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्मै भत्तादार नेता छन । जनप्रतिनिधी, सांसद, तिनका सहयोगी, सरकारी नियुक्ति पाउने र पाउनका लागि धाउने सबै नेता, ठेक्का पार्न हिंडने, कमिसन झार्न हिंड्नेहरु पनि नेता भए । नेता निवास, मन्त्री क्वाटर, मन्त्रालय सम्म यिनिहरुकै पहुँच र रवाफ बढेको देखे पछि ऐले इमान्दार र झण्डे, डण्डे, झोले कार्यकर्ताको उपादेयता सकिएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
हिजोको आदर्शका कुरा बिर्सनु हुन्न भन्नेहरु खोक्रा मान्छे भनिन्छन् । करोडौंका कुरा गर्ने, सुन्ने र सुनाउने मात्र पार्टीमा अटाउने हो कि भन्ने आभास भई रहेको छ ।’
उनको कुरा त ठिकै लाग्यो । तपाईंलाई नि ?